I-SEO & amp; Ukukhangisa kweDijithali - Ukuqonda Okubalulekile Kusuka Ku-Semalt
I-SEO & Ukukhangisa kweDijithali - Ukuqonda Okubalulekile Kusuka Ku-Semalt
Cabanga nje ukuthi unesitolo ngaphandle kwendlela yokubonisa ngayo. Ngcono kakhulu, abantu abanomdlandla angase ahlele ukuze ahlole imikhiqizo noma acele imikhiqizo engahlobene nokuthi uyithengisa. Kodwa kuthiwani uma une esitolo nge igama elifanele kanye nemifanekiso yemikhiqizo oyithengisayo? Lokhu kuzokwenza amakhasimende abheke ukuthi angene kuwo, abuze imibuzo mayelana neimikhiqizo ngisho nokuthenga eminye yemikhiqizo. Lezi zithemba kungenzeka zisakaze izwi mayelana nesitolo sakho nemikhiqizo kwabanye abantuokuhunyushwa kube yi-traffic ephakeme kanye nokuthengisa. Isibonelo sokuqala sifana nesayithi engalungiswanga ngesikhathi sesibili isibonelo sibhekisela kwisayithi elungiselelwe kahle.
Isazi esiholela phambili i-Semalt Imisebenzi yeDivaysi, u-Andrew Dyhan, ichaza kahle indlela yokuhlanganisa i-SEO nezinqubo zokumaketha digital - cheap high bar stools.
Ukusebenzisa injini yokusesha (SEO) yinqubo yokwenza isayithi ilula ukubona,kulula ukuhlukanisa futhi ukukhahlela. Ezingeni eliyisisekelo kakhulu, ukusekela kahle kusiza abathengi ukuthola ibhizinisi lakho phakathi kwezinkulungwane noma izigidi zamanye amabhizinisi futhi yingxenye ebalulekile yimuphi amasu wokuthengisa digital.
i-SEO ihlose ukushayela abasebenzisi ebhizinisini lakho ngokusebenzisa amapulatifomu e-intanethi. Ukufeza lokhu,iwebhusayithi yakho kufanele ibeke phezulu ekhasini lekhasi le-search engine (SERP). Ukwenza kube lula ukuqonda lokhu, nasi isibonelo esiphelele:
Njalo ngenyanga, kunezingcingo ezingaphezu kwezigidi eziyi-14 ezisesidlangalaleni. Manje, cabanga ukuthi yini bekuyokwenzeka uma ingxenyana yokuseshwa kwezigidi eziyizinkulungwane eziyi-14 ifuna ibhizinisi lakho. Ukuthola ithrafikhi efanele eqondiswe kusayithi lakho, iinkampani kufanele ibeke kakhulu ku-SERP, ukhokhe imisebenzi yokuchofoza ngemikhiqizo kanye nokumaketha kwezokuxhumana.
Ukuze noma yiliphi ibhizinisi likhule, kufanele likhangise. Futhi nganoma yiliphi ibhizinisi le-intanethi,I-SEO iyalingana nokukhangisa kwamahhala. Ukuthuthukisa isayithi lakho kwenza kube lula ukukala ekhasini lokuqala le-SERP.
Njengoba kukhona inkolelo evamile yokuthi abantu bahlola futhi babuyekeze amakhasi amabili okuqala we-SERP,usezingeni ekhasini lokuqala unikeze ibhizinisi lakho ithuba lokuthola abantu abafuna ulwazi ngaphambi kokuthenga imikhiqizo.
Umsebenzi we-SEO usebenza kanjani?
Injini yokusesha injini isebenzisa umbhalo ukucacisa okuqukethwe kwekhasi. Baqedela inomboloyezenzo eziletha imiphumela yosesho kubandakanya ukukhwabanisa, ukuskena, nokukhomba kanye nokuhlola ukufaneleka nokuthola.Izinto eziyaziwa ukuthi zifaka umphumela wekhwalithi zihlanganisa:
ama-URL namagama wewebhusayithi
Ukuqonda ukuthi lo mjikelezo usebenza kanjani, kubalulekile ukungena emininingweni yokuthi i-SEO isebenza kanjani:
Uma isicabucabu siqeda ukukhasaza, amakhasi agcinwa noma axhunywe ku-a i-database enkulu lapho ulwazi olukhishwayo lukhishwa noma nini lapho umsebenzisi engena khona igama elingukhiye kwizinjini zokusesha.
3. Umsebenzi wokusesha:
Njalo uma ukusesha kuqaliswa, injini yokusesha iqhuba isicelo futhi uyiqhathanise ne-indexed content. Ukuze unikeze idatha enembile, injini yokusesha kumele ihlole ukufaneleka kwawo wonke amakhasi nokufanisa nabo nge-indexed data, futhi igama elingukhiye bangena ku-SERP.
Lokhu kuyithuluzi lokuxilongwa elenzelwe ukuhlunga ngamagama angukhiye akhathazekile nama-URL anemishwana efanele. Ilinganisela izimpendulo ezinokwenzeka futhi ibuyisela amakhasi ngamagama noma igama elifakiwe phakathi nosesho. Ngokuyinhloko, kunezinhlelo ezintathu zokusebenza: Izindawo zokungena esiteshini, okungaxhunyiwe kanye nendawo yonke.
Uhlobo ngalunye lwe-algorithm bukeka ezindaweni ezahlukene zekhasi lewebhu kufaka phakathiizixhumanisi, amathegi we-meta, ukubaluleka kwegama elingukhiye namathegi wetihloko. Njengoba izinjini ziqhubeka zilungisa ukulungiswa kwazo, kufanele uqhubeke ungalinganiizinguquko ukuze kugcinwe isikhundla esiphezulu.
Umphumela wokuphela kwenqubo uboniswa emiphumeleni yokusesha.
Isixhumanisi phakathi kwe-SEO nokudayiswa kwe-digital
Iningi labantu bacabanga ukuthi akukho umehluko phakathi kwe-SEO nokudayiswa kwe-digital,ukucacisa lokhu, kubalulekile ukuwahlola ngokujulile. I-SEO ihlose ukuletha imiphumela emibi. Ngakolunye uhlangothi, i-digital ukumaketha kuhloswe ukuba khona okuphelele kwe-intanethi kwebhizinisi elihamba ngaphezu kokusebenza kwe-injini. Ukusiza ibhizinisi eliku-intanethiukukhula kahle, kufanele usebenzise indlela yokuthengisa yedijithali ethembekile futhi ufake uhlelo olusebenzayo lwe-SEO.
Abanye ochwepheshe bezokukhangisa babhekisela ku-SEO ephelele njengedijithali elididiyelwe ukumaketha. Ngokuqhubekayo, i-SEO iphendukela engxenyeni ebalulekile yokumaketha kwe-digital. Ukuqonda lokhu, udinga ukuwaqonda Kungakanani i-SEO ishintshile phakathi neminyaka. Izindlela ezaphumelela kuma-90s noma ngo-2011 ziphelelwe yisikhathi ezibiza izindlela ezintsha.Namuhla, kunezinye izici eziningi ezisetshenziselwa ukuthonya i-SEO kubandakanya imidiya yezenhlalo nezixhumanisi ezihloniphekile ngokungafani nesikhathi esidlule.
Ukudala isu eliphumelelayo le-SEO
Ukuze ube nesistimu enkulu ye-SEO, udinga ukufaka i-SEO ephumelelayo isu. Isu elihle lihlanganisa:
1. Imakethe ekhonjiwe:
I-SEO ephumelelayo akuyona nje ukushayela ithrekhi kusayithi lakho, kufanele lisize ukuhlaziya kahle amakhasimende omphakathi kanye nezimo zezwe ukuze uqinisekise ukuthi ufinyelela amathemba anentshisekelo kwimikhiqizo yakho.
2. Indlela yokuhamba ngomakhalekhukhwini:
I-Google idinga ukuba amawebhusayithi afinyelele kumadivayisi eselula bese anika okulinganayoukwaneliseka kubasebenzisi kula madivayisi njengabantu abasebenzisa amakhompyutha.
3. Ezinye ongakhetha kuzo izinjini:
Ukuze usebenze kahle, isayithi lakho akufanele lenze kahle kuphela injini eyodwa yokusesha kodwa ngaphesheya kwezinye izinjini zokusesha.
4. Amagama angukhiye ahambisana nokubuyela ekutshalweni kwezimali:
Gxila ekuboneni nasekusebenziseni amagama angukhiye afanelekayo abantu sebenzisa ukucinga ulwazi ukuze uqinisekise i-ROI.
5. Okuqukethwe kwekhwalithi futhi usule iwebhusayithi:
Iwebhusayithi yakho kufanele ibe nobungane kubasebenzisi, icacise ukuhamba futhi kufanele ibe nokuqukethwe kwekhwalithi.
Ekugcineni, ezweni lokushintsha ama-algorithms, kufanele wazi njalo lokho I-SEO yinqubo engapheli. Ukukusiza ukuba uthuthuke phakathi kwazo zonke lezi zinguquko, cabanga ngethameli zakho ezibhekiswe kuzo, ufake endaweni eqinile amasu wokuthuthukisa futhi ucabange ngokusetshenziswa kwesayithi lakho.